ठमेल क्षेत्रका व्यापारीका रसाएका आँखा : भोलि उठी कहाँ जाने केही ठेगान छैन…. – Jagaran Nepal
ठमेल क्षेत्रका व्यापारीका रसाएका आँखा : भोलि उठी कहाँ जाने केही ठेगान छैन….
बाटोमा मान्छे नहिँडेका कारण डर रहेको उनले बताए । व्यापारै नहुने भएपछि धेरैले पसल बन्द गरेर बसेको बताउँदै उनले अब टिक्न गाह्रो भएको बताए । उनले भने, ‘ अब केही भएन भने भोलि यी समान बोकेर हिँड्नुको विकल्प छैन । दुई तीन महिना हेरौँ । भएको अलिकति जग्गा पनि बेच्ने अवस्था आयो भने हामी कहाँ जाने ? उनले दशंैेँसम्म हेर्ने र त्यसपछि पनि यस्तै अवस्था रहे सामान बोकेर हिँड्नुको कुनै विकल्प छैन्